Sibidhka Ku darista Sibidhka - Soosaarayaasha Ku Darka Sibidhka Shiinaha, Badeecado
BT-302 nooca polycarboxylate ...
JS-104 polycarboxy xarunta ...
Polycarboxylate Eter Monom ...
GQ-KG (L) / 01/02 Wakiilka Grouting Cable
GQ-KG t wuxuu ka kooban yahay qalab balaadhinta yar yar, soo-saaraha wax-soo-saarka sare, noocyo kala duwan oo ah maaddado aan dabiici ahayn iyo polymer dabiici ah oo lagu daray PO, 42.5 sibidh. Dareeraha aadka ufiican, qulqulatada xasiloon, darajo buuxin wanaagsan, hoos u dhac la'aan, ballaarin yar, ma laha walxo waxyeelo u leh xoojinta. Waa gro
GQ Defoamer waa curyaan u heellan polycarboxylate superplasticizer. GQ defoamer wuxuu u shaqeeyaa si deg deg ah, xasiloon wuxuuna ka hortagi karaa xumbo soo saarida waqti dheer.
GQ-SN Fiirsashada Fadhiga Flash - Liquid (Alkali la'aan)
GQ-SN waa nooc ka mid ah xawaaraha la taaban karo ee shubka gobolka. Qaybta ugu weyn ee GQ-SN waa sodium aluminate. Daboolida ayaa badanaa loo isticmaalaa shubka la buufiyay; waxay dardargelin kartaa geeddi-socodka qallafsanaanta ee la taaban karo si hufan, waxayna leedahay faa'iidooyinka cufnaanta hoose ee boodhka, adkeysiga hooseeya, qulqulka muddada dheer
GQ-210 Wakiilka Xoog Hore
Badeecadani waxay ka samaysan tahay isku-dar ah qaybaha kala duwan ee xoogga hore. Waxaa badanaa loo isticmaalaa dhammaan noocyada kala duwan ee mashaariicda la taaban karo ee leh shuruudaha xoogga hore iyo xilliyada kuleylka hooseeya. Tayada badeecadu waxay gaadhaysa heerka GB8076.
GQ-208 Agent Antifreeze Agent
GQ-208 wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah yareynta biyaha iyo noocyo kala duwan oo dabiici ah, qayb ka mid ah ka hortagga qaboojiyaha dabiiciga ah iyo qeybta xoogga hore. Badanaa waxaa loo isticmaalaa dhismaha jiilaalka dhammaan noocyada shamiitada lagu dhex rido, shubka hore. Tayada wax soo saarka ee JC475 iyo heerarka kale.
Cellulose Ether HPMC oo loogu talagalay Nadiifinta / La taaban karo / Grout ahaan Wakiil Wakaaladda Biyaha-ilaaliya
HPMC waa loo gaabiyey Hydroxypropyl Methyl Cellulose, waa ur aan lahayn, dhadhan lahayn, aan sun lahayn oo budada cad-cad ah. Sidoo kale waa non-ionic cellulose ether. Waxaa loo isticmaalaa sida dhumuc weyn, xasiliyaha, wakiilka haynta biyaha, emulsifier. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa warshadaha sida qalabka dhismaha, rinjiga & dahaadhka, cer